Vaovao Songadina avy any amin’ny Faritra Bongolava, Amoron’i Mania ary Itasy
Publié juin 21, 2022 · Mis à jour juin 22, 2022
BONGOLAVA : Nifanome tanana ary niara-niasa ny ANMCC (Ivon-toerana nasionaly misahana ny fanitsiana ireo fepetra ara-barotra) sy ny FCCIM (Federasiona misahana ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria eto Madagasikara) ary ny DRICC ho fiarovana ny mpandraharaha malagasy eny ifotony sy ho fampandrosoana ny fanondranana entana mankany ivelany. Nisitraka fampiofanana araka izany ireo mpandraharaha ara-barotra, ireo orinasa indostrialy ary ireo kaoperativa tany an-toerana ny 15 sy 16 Jona 2022 lasa teo.
AMORON’I MANIA : Nitsidika ny faritra ny solontena avy ao amin’ny Filan-kevitra misahana ny Fifaninanana (Conseil de la Concurrence) izay rafitra iray ambany fiahian’ny MICC ny 16 sy 17 Jona 2022 lasa teo. Nanatanteraka atrikasa sy fampiofanana izy ireo ho fampahafantarana ny andraikitry ny Filan-kevitra misahana ny Fifaninanana. Nisitraka izany ireo mpandraharaha ara-barotra sy ara-toekarena, ny manam-pahefana tany an-toerana ary ny ekipan’ny DRICC (sampan-draharaha misahana ny varotra). Tanjona napetraka moa ny fisian’ny fifaninanana madio sy mangarahara eny an-tsena sy eo amin’ny tsena anatiny. Nitondrana fanentanana ho an’ireo mpisehatra voakasika ny fanajana sy fampiharana ny lalàna mifehy ny fifaninanana 2018-020.
ITASY : Hetsika fanamarinana ireo fitaovam-pandanjana tao amin’ny Kaominina Miarinarivo I sy II indray no nanamarika ny herinandron’ny 13 Jona 2022 lasa teo. Mizàna miisa 136 no nandalo fitsarana ka 75 amin’ireo no tsy ara-dalàna ary tsy maintsy nentina namboarina. Ny vato mizàna kosa indray dia miisa 432 no voatsara ka 162 amin’ireo no tsy manaraka ny fenitra takiana. Mbola hitohy eny amin’ny kaominina hafa ny fisafoana sy fanamarinana ireo fitaovana ampiasan’ny mpivarotra eny an-tsena.
Article suivant Seha-pihariana Lavanila:Hitsinjo ny tombontsoan’ny mpamboly ny CNV
Article précédent Seha-pihariana Lavanila:Mpikambana 4 ao amin’ny Governemanta no tonga any amin’ny Faritra SAVA androany
Vaovaon’ny faritra Menabe:Fanatsarana ny fitaovana ampiasan’ireo mpanangom-bokatra sy fanatsarana eo amin’ny tontolon’ny fandraharahana any amin’ny faritra
par admin · Published juin 9, 2022 · Last modified juin 10, 2022
Vaovaon’ny faritra Amoron’i Mania : Mandroso hatrany ny asa fametrahana ny TANINKETSA INDOSTRIALY any Ambatofinandrahana
par admin · Published mars 16, 2022 · Last modified mars 18, 2022
Vaovaon’ny faritra BONGOLAVA: handray fepetra hentitra ny DRICC manoloana ny mety hisian’ny fanararaotana mamotika ny mpanjifa
par admin · Published février 10, 2022